Inona no atao hoe pipette ary inona no ilana azy? | Alika Manerantany
Una pipa antiparasite tavoahangy kely fotsiny izy io izay misy ranoka mavitrika ao anatiny. Vonona hampiasaina eo noho eo ireo ary tsy mila soloina, izay mahatonga azy ireo ho vokatra ahazoana aina, ary mety koa.
Flipes fllea tsy maintsy hotanterahina ambony, izay midika fa mifandray amin'ny hoditry ny alikantsika ilay blister, na amin'ny teboka iray na maromaro ary miaraka amina fampiharana iray monja, ny pipettes dia afaka manome fiarovana ny biby fiompintsika mandritra ny efa-bolana eo ho eo, miankina amin'ny pipette ary koa ny mpanamboatra manokana.
1 Tombony sy fatiantoka ny pipettes
2 Rahoviana ary amin'ny fomba fametrahana pipette?
2.1 Dingana 1: Omano ny biby fiompinao
2.2 Dingana 2: ny pipette mety
2.3 Dingana 3: fitadiavana ireo lakroa
3 Ny akora mavitrika amin'ny pipette ho an'ny alika
4 Ny pipet tsara indrindra ho an'ny alika
Tombony sy fatiantoka ny pipettes
Rehefa dinihina ny firafitra nanamboarana ny pipette, ireto manana ny fahafaha-miaro ny alikantsika avy amin'ny moka, parasy, koka, felam-pasika ary koa avy amin'ny ticks.
Ny fletes fllea dia maneho ny iray amin'ireo fitsaboana be mpampiasa indrindra ampiasaina ankehitriny noho ny fiononana tsara ananany rehefa mampihatra azy ireo, ary koa mandritra ny fotoana iankinan'izy ireo izany, ankoatr'izay afaka milamina isika, satria azontsika atao ny mandro ny biby fiompintsika ary miaraka amin'izay dia mihatsara fa tsy mila ny vokatra tsy maintsy very asa.
Ankoatr'izay parasy pipettes dia manana toetra mampiavaka azy manokana ary io dia tsy entin'ny rà izy ireo, noho izany dia tsy mametraka risika mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny biby fiompintsika izany. Ireo dia vokatra azo avy amin'ny biby, na dia amin'ny alika kely aza, izay vao roa herinandro monja sy ny bevohoka ary koa ny vehivavy mampinono.
Noho ny fiasan'izy ireo dia ilaina tokoa ny pipette parasy sorohana tsy hiseho ny parasy, ary koa ny fitsaboana ny olana naterak'izy ireo.
Ny fomba fiasa manokana ananan'ny pipettes parasy no mahatonga an'io rafitra tena mandaitra hamongorana ny parasyNa izany aza, tsy dia manampy be an'ireo biby tsy mahazaka ny paraky. Ireo no tranga izay tokony hampiasantsika ny vokatra mahavita mandroaka ny parasy, satria amin'izany fomba izany dia azontsika atao ny manakana ny parasy tsy hanaikitra ny biby fiompintsika ary koa hisorohana ny fihanaky ny fihetsika mahazaka.
Izany dia satria tsy misy akony ny fanafody rehefa manaikitra ny biby fiompintsika ny parasy.
Rahoviana ary amin'ny fomba fametrahana pipette?
Rehefa hitantsika fa voakaikitry ny katsentsitra toy ny parasy sy ny kongona ny biby fiompinay, ny zavatra tsara indrindra azontsika atao dia ny mametraka karazana ampinga Ary noho ny fanampian'ireny dia afaka misoroka ny biby fiompintsika isika, raha tsy hoe afaka mamindra aretina izy ireo.
Rehefa miresaka ampinga isika, tena izahay dia midika hoe pipet ho an'ny alikanay, izay mpandroaka na fiasan'ny katsentsitra, izay be mpanondro indrindra hitazomana parasy sy kongona lavitra araka izay tratra mandritra ny fotoana maharitra.
Ny fametrahana ny iray amin'ireny pipet ireny dia tsotra be. Zava-dehibe ny misafidy ny toerana mety mba hahatsapantsika fa mahazo aina ny biby fiompinay, ary koa manana endrika madio madio.
Dingana 1: Omano ny biby fiompinao
Fahita, ary iray amin'ireo tsy fahombiazana ihany koa ny fanirianao hametraka ny pipette amin'ny biby fiompinao amin'ny alàlan'ny fandroana azy mialoha. Ary lesoka izany. Ny alika dia tsy maintsy farafaharatsiny 2 andro tsy misasa ary tazomy 3 andro farafahakeliny aorian'ny fampiharana azy fa tsy mikasika ny rano.
Izany dia satria raha apetraka aorian'ny fandroana ny pipette dia mety hanorisory ny hodiny izany na hiteraka fanehoan-kevitra. Noho izany, tsara kokoa ny manasa azy ary, aorian'ny roa andro, apetaho aminy ny vokatra.
Dingana 2: ny pipette mety
Miankina amin'ny lanjan'ny biby fiompinao, mila pipette ianao na hafa. Matetika apetraka ao amin'ny faritry ny malazo eo anelanelan'ny nape sy ny soroka ny pipettes, fa rehefa antonony na lehibe na goavambe ilay alika dia tsara kokoa ny mizara roa ny fatra. Amin'ny lafiny iray ny hazofijaliana noresahintsika, ary amin'ny lafiny iray ny hazo fijaliana izay niforona teo anelanelan'ny valahany sy ny lamosiny. Amin'izany fomba izany dia hiaro bebe kokoa ny biby fiompinao ianao ary ny doka amin'ny vokatra dia tsy midika hoe tsy dia mandaitra loatra izy io.
Dingana 3: fitadiavana ireo lakroa
Mora tokoa ny mahita azy ireo mila manaraka ny lamosin'ilay biby fotsiny ianao ary mahatsapa ny banga amin'ny tananao (ny iray vao manomboka ny hatoka ary ny iray hafa manomboka ny faritra misy ny rambony mifatotra amin'ny valahany).
Rehefa vitantsika ny fizotrany dia avelantsika hiasa ny vokatra ka tsy misy parasy sy kongona ny biby fiompintsika.
Ny akora mavitrika amin'ny pipette ho an'ny alika
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe inona no ilain'ny pipeta hahomby amin'ny parasy, ny tapakila sy ny maro hafa? Ary holazainay aminao fa, na dia misy marika marobe aza, saika ny fotokevitra mavitrika dia izy rehetra.
Famonoana bibikely izany misy fiantraikany amin'ny bibikely. Manokana ho an'ny rafi-pitabatabana afovoanao. Ny zavatra ataony dia ny miady amin'ny bibikely rehetra izay te hijanona amin'ny alikanao, toy ny kiso, parasy, kongona na kongona.
Io poizina io dia poizina amin'ny saka. Ka, Raha manana alika mipetraka miaraka amin'ny saka ianao, dia asaina manalavitra azy. Tsara kokoa aza ny mampiasa pipette hafa tsy manana an'io akora mavitrika io hisorohana ny faharatsiana lehibe kokoa.
Toy ny teo aloha, dia famonoana bibikely ho an'ny bibikely, izay mandroaka ny moka ihany koa.
Izany dia voalaza ho tazomy ny parasy, fa, tsy toy ny hafa, amin'ity tranga ity dia tsy mamono bibikely. Ny zavatra ataony dia ny manakana azy ireo tsy hitombo na hivoatra ary hiteraka, maty tsy manan-janaka.
Famonoana bibikely izany miady amin'ny whitefly, parasy na aphids. Ankehitriny dia "misy poizina antonony" izy io, noho izany dia tsy dia ampiasaina firy izy noho ny vokany mety hitranga.
Ny pipet tsara indrindra ho an'ny alika
Matetika izahay dia manahy ny amin'ny fiarovana ny alika amin'ny parasy, ny tapakila ... amin'ny fahavaratra. Na dia misy aza ny fahafaha-misimisy kokoa, ary betsaka kokoa ny fidirana hitanao, ny marina dia afaka miompy amin'ny alikanao ireo mandritra ny taona. Ary raha ny marina, fiarovana dia tokony hitarina rehefa mandeha ny fotoana.
Eny an-tsena dia misy karazana pipety isan-karazany ho an'ny alika amin'ny habeny, marika, fiarovana, sns. Ny pipet tsara indrindra dia miankina amin'ny alika tsirairay, fa marina fa misy ny marika sasany izay nahazo ny fitokisan'ny maro. Ary izy ireo ihany koa no tena atolotry ny mpitsabo biby.
Eo anelanelan'izy ireo izy ireo: Frontline na Bayer. Amin'ireo roa ireo, ny Frontline dia iray amin'ireo tsara indrindra sy mahomby indrindra. Izy ireo dia mazàna indrindra amin'ny Fipronil sy Methoprene (na Permethrin) izay manome fiarovana fototra ary koa manampy amin'ny fisorohana ny parasy, ny kongona na ny koka tsy hipoitra indray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Inona no atao hoe pipette ary inona no ilana azy?